ရန်ကုန် ကိုထွေး : သင့်ကွန်ပြူတာ အတွက် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ....
လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ကိုထွေး welcome to my page created by ko htwe
သင့်ကွန်ပြူတာ အတွက် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ....
ပထမအကြိမ်ဝင်းဒိုးအတက်နှေးသည်ကို စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်လိုက်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ဖြစ်မလာစေရန် ကွန်ပြူတာကို လုံးဝ shut down မချပါနှင့်တော့။ ၀င်းဒိုးအတက်မစောင့်ရတော့ပါ။
စက်သုံးနေစဉ် blue screen တက်လာပါက ပြန်ကန်ချလိုက်ပါ။ တစ်ခါ မက နှစ်ခါမက တက်တက်လာပါက ကွန်ပြူတာ screen ကို သဘောင်္ဆေး အမည်းသုတ်လိုက်ပါ။ blue screen တက်လာသည်ကို မမြင်နိုင်တော့ပေ။
ဒေတာ ထည့်သွင်းမှု ချောမွေ့စေရန် Hard disk အတွင်းပိုင်းအထိ အိုကီ ဆပ်ပြာမှုန့်ဖြင့် မကြာခဏတိုက်ချွတ်ပေးပါ။ လိုအပ်ပါက အစွန်းချွတ်ဆေး နှင့် ဖားဥကျွတ်ဆေးပါ သုံးပေးပါ။
ကွန်ပြူတာ တက်မလာဘဲ အသံမြည်နေတတ်ခြင်းမှာ မန်မိုရီကတ်လွတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနှင့် Super Glue သုံးပြီး နောက်ဘယ်တော့မှ လွတ်လို့မရအောင် ကပ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်လျှင် သံနှင့်ရိုက်ပြီး သော့ခတ်ထားလိုက်ပါ။
CPU heat မတက်စေရန် ကွန်ပြူတာဖင်ကို ရေစိမ်ပြီးသုံးပါ။ လိုအပ်ပါက သုံးသူကိုယ်တိုင်ပါ စိမ်ကောင်းစိမ်ရ လိမ့်မည်။ ရေစိမ်လို့မှ အဆင်မပြေလျှင် ရေခဲတိုက်ထဲ သွားသုံးပါ။
ကွန်ပြူတာကို ပုံမှန်အပူချိန်ထက် ပိုမမြင့်ပါစေနှင့်။ အပူချိန်ကြီးလာပါက ရေခဲဝတ်အုပ်ပေးပါ။ သို့မှသာ ကွန်ပြူတာတုပ်ကွေးမ၀င်မှာ ဖြစ်သည်။
အပူချိန်မြင့်နေသော ကွန်ပြူတာကို လေတိုက်ထဲမထားပါနှင့်။ တတ်နိုင်သမျှ လုံလုံခြုံခြုံ နွေးနွေးထွေးထွေးနေပါစေ။ ပလတ်စတစ်အိတ်နှင့်ထုပ်ထားပါ။ တိပ်နှင့်ကပ်ထားပါ။ အခြေအနေပေးပါက ဖီနိုင်း ပရော်ပါ နော်လမင်း မပါသော ဖလူဇာကို တစ်နေ့သုံးကြိမ် တိုက်ပေးပါ။(ရေအေးဖြင့်သာတိုက်ပါ)
ဗိုင်းရပ်စ် ၀င်မ၀င် စစ်ရန် အန်တီဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုံးပါ။ လိုအပ်လျှင် အန်တီဗိုင်းရပ်စ်၏ ယောကျာ်း အန်ကယ်ဗိုင်းရပ်စ် ကိုပါ ခေါ်ပြီးရှာခိုင်းပါ။
အန်တီနှင့် အန်ကယ် ဗိုင်းရပ်စ်လင်မယားမှ ကွန်ပြူတာတွင် ဗိုင်းရပ်စ် ၊ ပိုးကောင်၊ ကုတ်ကမြင်းများ ၀င်ရောက်နေသည်ကို အချက်ပြလျှင် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ချက်ချင်း ဇာဂနာ ဖြင့် ကလော်ထုတ်လိုက်ပါ။ ပိုသေချာစေရန် ပုရွက်ဆိတ်ဆေး ၊ ကြမ်းပိုးဆေး၊ ခြဆေး များလည်း ထည့်ပေးပါ။
အပတ်စဉ် ခြင်နိုင်ဆေး မှုတ်ပေးပါ။ ကွန်ပြူတာအနီး ခြင်ယင် ပိုးမွှားများမလာရောက်စေရန် ခြင်ထောင်ချထားပေးလျှင်လည်း အဆင်ပြေပါမည်။
ကွန်ပြူတာအသုံးများပြီး motherboard လောင်ပါက fatherboard ပြောင်းတပ်ပါ။ ထို့နောက်မှ တစ်ဆင့် sonboard ၊ daughterboard ၊ စသဖြင့် ဆွေမျိုးစုံအောင်တပ်ပါ။ တစ် board မဟုတ် တစ် board နှင့် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Posted by kohtwe at 15:11
ရယ်စရာကာတွန့်(2)
ရောက်လာသူ အပေါင်း မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
သူတို့ ဆီလည်းသွားလည်လို့ ရပါတယ်
နယူးယောက်မြို့ ရွှေည၀ါ ဆရာတော် တရားပွဲ
ကမ္ဘာ့ ပေါ်မှာတည်ရှိသမျှ ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေထဲကအထင်ကရ ပိရမစ်များ
Blog Slider လုပ်နည်း
Internet Download Manager 6.12 Build 11 + Patch
dateline irrawaddy နဲ့ အမည်မည်းစာရင်း
ဌေးလွင်ဦး ၏ အမှန်တရား ၊
Michael Learnsသီချင်းတွေနားထောင်လို့ ရတယ်
Youtube မှဗွီဒီယိုဖိုင်များကို Mp3 ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သောနေရာ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများ၏ ကုဒ် နံပါတ်များ
မိမိတို့ ၏ password များဘယ်လောက်လုံခြုံမှုရှိမရှိစမ်းသပ်ကြမယ်
အင်္ဂလိပ် မှ မြန်မာ သို့ ပုံများဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သောနေရာ
ဘောလုံးပွဲ Highlights ပြန်လည်ကြည့်လိုသူများအတွက်
မြန်မာ Search Engine
မြန်မာသတင်းများ ၊ မြန်မာရုပ်ရှင်များ ၊ မြန်မာဗွီဒီယိုများ
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါ for everyone Hepat...
ကောသလ မင်းအိပ်မက် (၁၆ )ချက်....
3Q ရှိရင် လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ..
WiFi အင်တာနက် သုံးစွဲသည့် အမျိုးသားများ သတိထားဖွယ်...
ွGoogle ကုမ္ပဏီ၏ မြင်သူ အံ့သြ ငေးမော ရမည့် လန်ဒန် ရ...
စကားကြီး(၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း
ဒီဘ၀က ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ နောက်ဘ၀မှာအကျ...
သာသနာ ကွယ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း
ချက်ပြုတ် ရာမှာ ﻿ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းရဲ့ အာနိသင် မပျက် ပ...
တွေးရယ်စရာ အွန်လိုင်းပေါ်ကကာတွန့် များ
တောင်တွင်းကြီးမြို့ တွင် မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှြုေ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်သစ်တစ်ဥ...
၅၀၀၀ တန် ဆင်းကဒ် ရောင်းမယ့် ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏ္ဏီ န...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျန်းမာဆိုင်ရာအချက်များ......
softwareတွေ Driverတွေ အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ကျနော် သူငယ်...
နေ့ စဉ်ထိတွေ့ နေသော ware များအကြောင်း...
ဘီလ်ဂိတ် ပေးသော အကြံဥာဏ်(၁၁)ခု..
ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်း(၁၀) ချက်
။။။။။ ၀မ်းစာ ။။။။။ ။။ သူငယ်ချင်း... မင်းစဉ်းစာ...
Dhamma e-Book written by Ashin Sandadika
အသျှင် အရှင်, ဦးပဉ္စင်း, ကိုရင် ဝေါဟာရ
ညီမလေးနားထောင်ဖို့ flash song
FLASH SONG နားဆင်ရန်
ရွှေတိဂုံ အမေ-ထူးအိမ်သင် မ-sample တိတ်တခိုးအချစ်-ရိန်မိုး မ-ပူစူး မင်းကိုသတိရရင် တွဲဖက်အပြုံး-ရိန်မိုး အရမ်းပဲချစ်နေပြီ-ရိန်မိုး လေပြေ ဆု အမေတခုသားတခု အရမ်းပဲချစ် ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူ ရိုမီယို ဂျူးလီးယက် တောဂေါ်လီ သူလေး ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းခြင်း ကြွေပါစေ လမ်းမခွဲကြေး မင်းနဲ့ငါနဲ့ မေမေ မင်းအတွက်ပါ သနပ်ခါးချစ်သူ အနီးဆုံးလူ ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါအမေ သင်္ကြန်မိုး အပြစ်မမြင်ပါဘူး ကမ္ဘာအပြင်ဘက် နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ် မျောလွှင့်နေတဲ့တိမ် အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုး ငါချစ်တာမင်းပဲ နေညိုရင် ပူစီ ချစ်သူကို ချမ်းမြေ့ပါစေ စိတ်ကူးယဉ်အနမ်းများ နွေဦးကဗျာ မိုးသိပါစေ ဘ၀ချင်းခြားလည်းချစ် ပုဂံဘုရားဖူး မမကြောင့် ညစဉ်ညတိုင်း အလွမ်းမိုး မြူမှောင်ဝေကင်း နှစ်ပါတ်လည် ကောင်မလေး နောက်ဆုံးရင်ခွင် မလွမ်းပဲမနေနိုင်ဘူး လုံးဝမမေ့သေးဘူး အိမ်-ဓီရာမိုရ် လမ်းဆုံ ကိုကိုက အာဇာနည်(၄)ပုဒ်နဲ့address-card တမိုးအောက် ယုံပါရင်သို့ ဒီတညတော့ ဟင့်အင်းအမေကဆူလိမ့်မယ် တခါထဲချစ်ချင်လို့ပါ ထူးဆန်းလွန်းတဲ့အချစ် ပြော နေချင်တယ်မင်းအနား ဝေးလို့နေမလားမေ့လို့နေမလား ရွှေတိဂုံ(၂) သံယောဇဉ် သံစဉ်တွေနဲ့ချော့သိပ်မယ်
ဖူးစာရှင် အိမ်ထောင် ဘယ်လိုရွေးမလဲ မသိသေးသောသူတွေ အတွက်ပါ...
1. က 2. ခ 3. ဂ 4. ဃ 5. င 6. စ 7. ဆ 8. ဇ 9. ဈ 10.ည 11.ဋ 12.ဌ 13.ဍ 14.ဎ 15.ဏ 16.တ 17.ထ 18.ဒ 19.ဓ 20.န 21.ပ 22.ဖ 23.ဗ ...
softwareတွေ Driverတွေ အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်..
ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေကို softwareဆိုဒ်လေးနဲ့ နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပေး လိုက်တာပါအဲဒီဆိုဒ်မှာ လိုအပ်တဲ့ softwareတွေ Driverတွေ အလွယ်တကူယူလို့ရ...
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါ for everyone Hepatitis B & C အကြောင်းသိမှတ်စရာ
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါ for everyone Hepatitis B & C အကြောင်းသိမှတ်စရာ ယခုအခါ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပို...
WiFi အင်တာနက် သုံးစွဲသည့် အမျိုးသားများ သတိထားဖွယ်
အသက်(၂၆)နှစ်မှ (၄၅)နှစ်ကြား အမျိုးသား (၂၉)ဦး၏ သုက်သွေးကို စမ်းသပ်လေ့လာမှုအရ ယခုသုတေသန ရလဒ်ကို ပညာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ် WiFi အင...
။။။။။ ၀မ်းစာ ။။။။။ ။။ သူငယ်ချင်း... မင်းစဉ်းစားကြည့် ဗျိုင်း၏အစာ ၊ ငါးဆိုတာကို ငါလည်းအသိ ၊ မင်းလည်းသိ၏ စိစစ်မှတ်သား ၊ ခွဲခြားရွေးနု...
ကွက်လပ်ဖြည့် မေတ္တာ(ဆရာတော် အရှင်တေဇာနန္ဒ )
ကွက်လပ်ဖြည့် မေတ္တာ(ဆရာတော် အရှင်တေဇာနန္ဒ ) ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ သူငယ်ချင်းများ မိတ်...
Electronics နည်းပညာကို လေ့ လာ လိုက်စားတော့မည် ဆိုလျှင် “Electronics” ဟူသော ဝေါဟာရ ကို အခြေ အ မြစ်ကျကျ သိရှိ နားလည်ထားရန်လိုအပ်ပါသ...
(၁) အမေး။ ။နွားနက်လေးခု၊ ဝှေ့မှုဟန်ပြင်၊ မဝှေ့ကြဘဲ၊ ရှောင်လွဲသည်မြင်။ အဖြေ။ ။အရှေ့အနောက်၊ တောင်မြောက် မိုးဆင်၊ ခြိမ်းသံပေး မိုးဝေးလွင့်ပေ...
ဗုဒ္ဓသာသနာ့ အလံအကြောင်း ယခု ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ့အလံသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ရောင်ခြည်တော် (၆)သွယ်ကို ဖော်ကျူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အငြိမ်းစား အမေရိကန်လူမ...
လူတွေကို ကိုယ်သိထားတာထက် ပိုသိစေချင်တယ်....သူတို့ အဲသလို သိသွားရင် ကိုယ်ပေးလိုက်ရသည့်အရာဟာ ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားတယ်...ကိုယ့်ထက်တော်တယ်..သိမယ...
ကိုထွေး . Powered by Blogger.